Kana une akazvipira Pet kununura rwendo vari pano zvahungava hwakaita zvakavimbika shoma, Mazano uye mazano kukubatsira pamwe nzira yako!
Kana uchida zvishoma rudo unofanira kupa zvishoma rudo! – Spending the time to send your friends lives every time you log in (kana chakaita kuita kudaro) ndiyo nzira yakanakisisa nechokwadi pachako mailbox yako anobuda nepfungwa rokuponesa rudo anobatsira. Ipa shoma awane chiduku!
Rega kuita zvose iwe waudzwa! – ayo chete hapana fun..but wayo akakodzera munyaya iyi, kana iwe kuvhura Pet the saga mutambo uri kazhinji akasangana chidzitiro zvikaita kuti kutumira upenyu, runoita kana Anokukumbira shamwari…MUSAENDA tuma inokoka, zvakakomba kana munhu haisi achitamba zvino ivo dont kuda kuva, kana kuti kana vanorarama pasi padombo. Tumirai upenyu uye inofamba neshamwari vari kare kutamba, asi nokutuma Anokukoka iri chete okushambadza Mambo uye zvinovhiringidza vanhu vakawanda, kunyanya vaya vasina kunyanya Tech savvy sezvo vachiwanzoti vanogamuchira ose ziviso sezvo email zvakare.
Shandisa yenyu unotii! – Kusiyana Candy Crush uye Papa Pear the saga upi zvasara inofamba mu Pet Rescue the saga usaora ikava pfungwa bhonasi kana zvitarisirwa zvako apera, kamwe yenyu mhuka dziri anonunurwa uye pfungwa dzako vavariro kunozadziswa ndicho end..thankyou kuti nokutamba, kufamba zvakanaka pamwe ikozvino! so if you really want to earn those three stars I suggest you work your last pet to the bottom and sit it on top of a fail proof group of blocks that you can clear with your very last move or if you have a firecracker to use you can always go with that.
Knock zvinogumbura dzako! – Metal boxes are pains in the neck! Akanyatsofunga tinoonga kuti! pane mbiri chete nzira kuvabvisa kubva bhodhi kusvikira; ridzai kundovaisa kana kuchivabudisa kure. Kushandisa bhomba unogona ichene kuti mabhokisi vana panguva kana kuedza kusiya navo pamusoro wechikamu kuti miromo yesimbi kure kamwe chidzitiro kunoita pasi. Hapana zvakawanda anokonesa pane kunetseka nzira yako pasi chete kuwana une akanaka uye fluffy vakahwanda pamusoro bhokisi!
General Pet Ndisunungurei zvahungava hwakaita zvakavimbika uye muromo, 7.5 out of 10 based on 2 ratings